पुनमको जीवन रक्षाका लागि सार्वजनिक अपील – Sadarline
बाँकेमा कोरोनाको ‘ग्राफ’ बढ्दै, मंगलवार २६ जना थपिए
खजुरास्थित औद्योगिक ग्रामको अवलोकन
भेरीमा बेड अभावसंगै विकल्पको खोजी गर्न आग्रह
नेपाली भूउपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिँदै
पूर्वराजदूत झा हत्या अभियोगमा दुई पक्राउ
पुनमको जीवन रक्षाका लागि सार्वजनिक अपील
४ जेष्ठ २०७६, शनिबार १८:५६
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ निवासी बोन म्यारो पीडित पुनम नेपाली ‘बादी’को जीवन रक्षाका लागि सहयोगको अपील गरिएको छ । प्लाष्टिक एनिमीयाका कारण पुनमको ५ महिनादेखि बोन म्यारोमा समस्या देखिएको हो ।
उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेपनि अझै सुधार नआएको पुनमका पति सुरेश नेपालीले जानकारी दिए । हाल नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेपनि थप उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएपछि पुनमको जीवन रक्षा गर्न आर्थिक सहयोगका लागि परिवारले सार्वजनिक अपील गरेको हो ।
उपचारमार्फत पूर्ण निको हुन करीव १५ लाख खर्च लाग्ने चिकित्सकले बताएपछि आर्थिक सहयोगका लागि आहवान गरिएको हो । पुनम नेपाली ‘बादी’लाई बचाउन अभियानमार्फत शनिवार आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा पति नेपालीले बोन म्यारोका लागि रकम आवश्यक परेको दुःखेसो पोखे ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहयोगी मनकारी दाताले श्रीमान् सुरेश नेपालीको बैंक अफ काठमाण्डौ नेपालगञ्ज शाखामा रहेको खाता नं. ०५०५०००१८११७५२४ मा सहयोग रकम जम्मा गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सदरलाइनडटकम, काठमाण्डौ : नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध थप आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा आइतवार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले थप आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न हुँदासमेत सरकारले जायज मागहरु सम्वोधन गर्नेतर्फ कुनै गम्भीरता देखाएको छैन’ महासंघद्वारा जारी […]
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:५८
६ पुष २०७७, सोमबार १६:५३
घेराबन्दीले संसद् विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्रीको भनाई
६ बैशाख २०७७, शनिबार १५:०६
नेपालकी दोश्रो कोरोना संक्रमित युवती निको भइन्
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १४:५४
२४ पुष २०७६, बिहीबार १८:२१
खजुरामा शिक्षा र स्वास्थ्य नीति पारित